eNasha.com - बास्सा र एक्काको चक्कर
बुधबार बेलुकी राजधानीस्थित पेज थ्री बारमा नयाँ गीति एल्बमको रोचक पारामा सार्वजनिक गरियो । आगन्तुक सबैलाई प्लेयर्सको एक-एक वटा अडियो चक्का थमाइएको थियो । प्रमुख अतिथिहरु निर्देशक भुषण दाहाल र इमेज एफएमका प्रबन्धक भरत शाक्यले एल्बमको र्सार्वजनिक गरे । त्यसपछि मञ्चबाट घोषणा गरियो, "अब सबैले अडियो चक्का खोल्नुहोस् ।" आगन्तुकहरुले अह्राएबमोजिम क्यासेट चक्का खोले ।
"क्यासेट चक्काबाट तासको पत्ता निकाल्नुहोस्", कार्यक्रम सञ्चालक हेम सुवेदीले माइकबाट आवाज दिए । त्यसपछि आगन्तुकहरुले फेरि चक्काभित्र घुसाइएका तासका पत्ताहरु भटाभट निकाल्न थाले । सुवेदीले थपे- "यदि तपाइँसँग तासको पत्तामा एक्का र बास्सा छन् भने उपहार तपाइँलाई कुरिरहेका छन् ।"
त्यसपछि साइबरसंसारडटकमका वेब निर्देशक दीपङ्कर कसजू र पत्रकार दीपेन्द्र लामा हुलबाट फुत्त निस्किए । उनीहरुलाई क्रमशः भोटेको एक्का र पानाको एक्का परेको रहेछ । त्यसपछि दुवैले प्रमुख अतिथिहरुबाट चार वटा सीडी तथा भीसीडीको उपहार पोको थापे ।
यो रोचक कार्यक्रम जुराएका थिए गीतकार योगेन्द्रमणि दाहालले । उनको नवीनतम् गीतिएल्बम 'प्लेयर्स'को सार्वजनिकीकरण नौलै प्रकारले गरुँ भनी उनले यो उपाय अपनाएका थिए ।
यसअघि उनको एल्बमलाई रियाज म्युजिकले बजारमा ल्याउने गरेकोमा यस पटक भने म्युजिक डटकमले बजारीकरण गरेको छ । एल्बममा नेपाली तारा दीपक लिम्बु, सुगम पोखरेल, दीपेशकिशोर भट्टराई, सरोज दत्तले दुइ-दुइ वटा गीत गाएका छन् । ती गीतमध्ये हरेकले एउटा 'फास्ट' र अर्को 'स्लो ट्रयाक' गाएका छन् । अघिल्लो एल्बम 'अक्षर'भन्दा बढी लोकप्रिय हुने दाबी गीतकार दाहालको छ ।
कार्यक्रममा दुइ वटा म्युजिक भिडियोसमेत प्रदर्शन गरिएका थिए ।
आउ समाउ मेरा हातहरुः कार्यक्रममा भूषण दाहाल, भरत शाक्य र आलोक नेम्वाङ
भो पर्दैन ढोग्नः नेपाली तारा दीपक लिम्बुलाई उपहार दिँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूषण दाहाल
लौ चिनिराख, लामो रेसको घोडा उही होः भूषण दाहाल र गायक सुगम पोखरेल कार्यक्रममा रमाइलो गर्दै
लोकप्रियता साइबर संसारकोः साइबरसंसारडटकमका मोडलहरुको तश्वीर पेज थ्री बारका भित्तामा
नो कमेन्टः पेज थ्रीका सञ्चालक तथा साइबर संसारका सञ्चालकका साथ म्युजिक डटकमका सञ्चालक
मैले जस्तै तिम्ले पनि मुस्काएर हेरः कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी सुरज श्रेष्ठ
पोजिसन अनेकः कन्सेप्ट डिजाइनर अनील स्थापित, सञ्चारकर्मी अनील तण्डुकार, गायक सरोज दत्त र म्युजिक डटकमका सञ्चालक महेश वंशल
केटा हो इ न्यूजको लोकप्रियता कति छ हँ ?: कार्यक्रममा च्यानल नेपालको इ न्यूजका रिपोर्टरका साथ अन्य
दुइ मिनेट है, म मेरी प्रियासँग गफ गरिहालौँ: नवगायक मुनाल मोबाइलमा गफिँदै
नखानु पानी तोङ्बाकोः सञ्चारकर्मी सञ्जय बराल र गायक विजय लामा रोमान्टिक मूडमा
म, मेरा साथीभाइ र मेरो म्याकड्वेल्सः अनील स्थापित, अनील तण्डुकार तथा अभिनव कसजू
खै त ? पहिलेको जस्तो भिडियो बनेन नि !: इमेज च्यानलका कार्यकारी निर्माता सहेन्द्र श्रेष्ठ र गायक छिरिङ भुटिया
ज्ञानी मान्छेले अरुले बोलेको सुन्छन् मात्रः गायक सुगम पोखरेल तथा १९७४ एडी ब्याण्डका सदस्य मनोज केसी
हामी कमेडीमा पनि कम छैनौँ: सञ्चारकर्मीद्वय हेम सुवेदी र दीपक विहीन तथा बारमा गफ लडाउँदै सञ्चारकर्मी आशिष लिङदेन र गायक अराज केशव
पत्रिका कसरी बचाउने भन्ने गम्भीर कुरा हो, पख्नुस् है म ध्यान गरेर पत्ता लगाउँछुः म्युजिक डायरी र ग्ल्यामर प्लस पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशकद्वय तुलसी गिरी भावुक र राजाराम फुँयाल
हामी तीन भाइ, सबै गीत लेख्छौँ र सबै कार्यक्रम चलाउँछौँ: इमेज एफएमका कार्यक्रम सञ्चालक त्रय निराजन, सञ्जय र नरेश
शुभकामना, नयाँ एल्बमलाईः कार्यक्रममा आफ्ना गीत प्रस्तुत गर्दै गायक दीपेशकिशोर र साथमा गितारवादक भूपेन्द्र वज्राचार्य
ग्यांग्स् अफ प्लेयर्सः प्लेयर्स एल्बममा परेका मिहिनेती दिमागहरु गीतकार योगेन्द्रमणि दाहाल, सुगम पोखरेल, दीपक लिम्बु, सरोज दत्त, दीपेशकिशोर, अनील स्थापित र राजेश बंशल
ती हल्लाहरु हुन् तिमीले सुनेकाः गायक जेम्स प्रधान तथा ताल म्युजिकका सञ्चालक असलम खान
जे छ त्रि्रै मुस्कानमा छः चर्चित म्युजिक भिडियो निर्देशक सुरज शाह
खै त आदेश आएन नि उद्घोषकको भाषण ठोक्ने ! : कार्यक्रममा अतिथि तथा आयोजक मञ्चमा
दाइसँग फोटो घिचौँ कि ? : प्रख्यात साउण्ड इञ्जिनीयर प्रदीप उपाध्याय र म्युजिक डटकमका राजेश बंशल
र, यो मायाको चिनो तिम्लाईः एल्बमका संगीत संयोजक महाराज थापालाई मायाको चिनो बाँढ्दै अतिथि भरत शाक्य
त्यो गाउँको ठिटो म, दीपु मेरो नामः कार्यक्रम सकिएपछि इनशाडटकमसँग फोटो खिचाउँदै दीपक लिम्बु
वाह, क्या जोडी छ !: गायक सरोज दत्त तथा श्रीमती दत्त
मुखका चिकन, बगलीमा सितनः गायिका नलिना चित्रकार खाजामा आएको चिकन चपाउँदै
रिलिज क्या बात ! नेपाली तारा सङ्गीतकार समुद्रपार प्रेम र विवाह अवार्ड उपलब्धि लुकेका कुरा कीर्तिमान भिडन्त विचार तातोपीरो गीतकार गायक ट्रयाक बाहिर रुचि गायिका पेज थ्री हल्ला